Hojii OBN Afaan Oromoo kana ilaalaa. Suuraan oduu Boongaa kaleessaaf isaan fayyadaman - Kichuu
HomeAfaan OromooTVHojii OBN Afaan Oromoo kana ilaalaa. Suuraan oduu Boongaa kaleessaaf isaan fayyadaman
Hojii OBN Afaan Oromoo kana ilaalaa. Suuraan oduu Boongaa kaleessaaf isaan fayyadaman ( kan Obbo Lammaan duubaan mul’atu) suuraa yeroo yaa’ii OPDO/ODP Jimmaa kaafame ture. Inni kaleessaa isa Abiy kophaa ofii mul’atu sanadha. Maaliif suuraa ji’oota hedduu dura kaafame kan kaleessa Boongaatti kaafame fakkeessanii fayyadamuun barbaachise laata? Gaaffii kana qabadhaatii wayita Obbo Lammaan darbee darbee Abiy waliin mul’atu habukaakkiin OPDO FB kana gubbaa jirtu akkamitti akka qabaan dadhabu yaadadhaa. Fakkeenyaaf waa’ee Boongaa kaleessaa irratti suraa Abiy caalaa kan Obbo Lammaa fayyadaman. Ofii Obbo Lammaa fi Abiy dura-taa’aa fi itti-aanaa paartii tokkichaa ta’anii osoo jiranii waliin ta’anii uummata duratti mul’achuun maaliif erga yoomii ‘miracle’ ta’e laata. OBN Afaan Oromoo waan dalagaa jiru akka qabu ifaadha. Innis Abiy Ahimediin simboo Obbo Lammaatiin uummatatti dhiyeessuudha. Ayi OBN sagalee uummataa, anaan.